သငျသညျခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာစတင်နိုင်ပါသည်. တိုးတက်ခြင်း ခြေတံရှည် ခရက်ဒစ်ကတ်များရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ချေးငွေတည်ဆောက်ရန်ရုန်းကန်နေကြသူအခြားလူမှအာမခံထားပါသည်. အဆိုပါလုံခြုံအကြွေးကဒ်များကိုသင်ပြီးသားသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးစခွေငျးငှါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အကြွေးမဟုတျပါ, သို့မဟုတ်သင်ပေးဆောင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုဂတိထားသော. ဒါပေမယ့်သင်ကအကောင်းတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာတည်ဆောက်ခွင့်ပြု. ဘဏ်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်ကိုလည်းခရက်ဒစ်ကတ်များတယ်ပါပြီ. ခြေတံရှည်အနိမ့်အတိုးနှုန်းရှိပြီးကုမ္ပဏီများသည်၏အခြားစျေးနှုန်းများထက်လျှောက်ထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူ. ဒီတော့အကြွေးသမဂ္ဂများပြုပါ.
credit သမဂ္ဂများဘဏ်များကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူအောင်မြင်ဖို့ကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. အားလုံးအကောင့်အသစ်များ၏ပိုင်ရှင်တွေအတူတကွအကြွေးပြည်ထောင်စုရှိ. ဒါဟာပိုက်ဆံချေးသို့မဟုတ်လုံးဝမအကြွေးသမိုင်းရှိသည်သောဝင်ငွေနည်းပြည်သူများနှင့်လူမျိုးကိုအကြွေးဝယ်ကတ်များကိုပေးခြင်းဖြင့်အကြွေးသမဂ္ဂများကူညီပေးသည်. ဒါဟာသင်သိပ်ပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီကြမည်.
ပေါင်ကလူတစ်ဦးနေအိမ်မဝယ်နိုင်သောချေးငွေများဖြစ်ကြောင်း. တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လတစ်ဦးကြီးတွေထပ်တိုးရှိပါတယ်. သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကငှားပေးဆောင်ထက်မပိုကြောင်း, အဆုံး၌, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်! ဒါဟာပေါင်ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သို့သော်လည်းသင်တို့ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြွေးသင်ကူညီစေခြင်းငှါ.
ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ (CDFIs) အကြွေးသမဂ္ဂများဆင်တူ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေအမြတ်အစွန်းရစေချင်ကြပါဘူး. အဲဒီအစား, သူတို့ကလူအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးလို. အစောပိုင်းချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများ, အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသစ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုက်ဆံချေးနှင့်အိမ်များသင့်လျော်သောစျေးနှုန်းများတည်ဆောက်
သငျသညျအနီး CDFI ရှာဖွေပါ
အင်တာနက်ပေါ်ရှိဒုက္ခသည်စင်တာမှ ပို. အရင်းအမြစ်များကို